Igumbi langasese + igumbi lokugeza lezivakashi, linethezekile futhi lihlanzekile! - I-Airbnb
Igumbi langasese + igumbi lokugeza lezivakashi, linethezekile futhi lihlanzekile!
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Elise
Umbhede ophezulu womcamelo wendlovukazi ulala amabili ekamelweni lakho langasese esitezi esikhulu sendlu yami. Amabhulokhi amane nje aya eVictory Memorial Parkway, exhumanisa neGrand Rounds bike/izindlela zokuhamba ezizungeza i-Mpls. Uhambo lwemizuzu eyi-10 ukuya edolobheni laseMpls, futhi lufinyeleleka kalula ngemigwaqo emikhulu eminingi. Ngiyathanda ukuthi indawo engihlala kuyo ihlukene, isendaweni emaphakathi, futhi inezindlu eziningi ezinomlando, ezinakekelwa kahle.
Ikhaya lami liyindawo ethokomele neyamukelekayo ongaphumula futhi ushaje kabusha ngesikhathi sakho eMinneapolis! Uzoba nelakho igumbi esitezi esikhulu, kanye nokusetshenziswa kwendlu yokugezela ephansi, ezokwabelwa ezinye izivakashi ze-Airbnb. Igumbi lokulala linombhede wendlovukazi, indawo yokulala, kanye nekhabethe.
4.95 · 286 okushiwo abanye
Ngisendaweni yasemadolobheni yaseCleveland e-NW Minneapolis. Ibhulokhi yami yakhiwe amakhaya anomndeni owodwa (i-duplex eyodwa ekhoneni), ikakhulukazi abanikazi bezindlu kanye nezindawo ezimbalwa eziqashisayo. Indawo engihlala kuyo ihlukahlukene futhi iphephile--ngeke ibukeke njengendawo engaphansi kwedolobha. Ngokuvamile uzozwa izingane zomakhelwane zidlala ngezimpelasonto nakusihlwa ezinyangeni ezifudumele. Ikhaya lami lingamabhulokhi amane e-Victory Memorial Parkway enhle, eyingxenye yemigwaqo yebhayisikili/ yokuhamba ngezinyawo e-Grand Rounds ehamba eMinneapolis yonke, futhi ehlukile kuzo zonke isizini. Ngingaphansi kwemayela ukusuka eNorth Memorial Hospital (ngiyazizwa izinhlabamkhosi nezindiza ezinophephela emhlane lapho ngijabulela ivulandi lami), kanye nemizuzu eyi-10 nje yokushayela ukusuka edolobheni laseMinneapolis. Kulula futhi nokufinyelela emigwaqweni emikhulu eminingi ukuze uzungeze indawo yaseTwin Cities.
Indawo ehlala abantu abaningi--angikwazi ukuqhosha ngesitolo sekhofi ekhoneni :) Amabhizinisi aseduze aqhelelene namabhlokhi ambalwa, futhi ahlanganisa i-Lowry Cafe emangalisayo, i-North End Hardware ephethwe umndeni, kanye ne-Subway, Idola Lomndeni. , kanye ne-ALDI, kanye nehhovisi leposi. Isevisi yebhasi yaseMinneapolis ithembekile kakhulu, kodwa ikhaya lami cishe lilingana kangcono uma uzoba nemoto ngenkathi usedolobheni.
Ngingafinyelelwa ngombhalo/ngocingo/umlayezo nganoma imiphi imibuzo ephakamayo ngesikhathi sokuhlala kwakho. Uma ufona sicela ushiye umlayezo!